Home News MW Maxmed C. Waare oo cashar taariikhi ah maanta bixiyay fariina u...
MW Maxmed C. Waare oo cashar taariikhi ah maanta bixiyay fariina u diray dowladda Federaalka
MW Waare oo lagu yaqaano codkarnimo iyo aqoon la xiriirta taariikhda Soomaaliya ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirkii Kismaanyo. MW Waare waxa uu sheegay in dalka uu soo maray dhibaatooyin fara badan oo intooda badan ku timid qalad siyaasadeed oo ay galeen hogaankii Soomaaliya. Waxa uu xusay sababihii keenay burburkii ku yimid Soomaaliya in inteeda badan la xiriirtay isbdalka ka dhacay gobolka Geeska Africa. Qaladaadka ay galeen hogankii Soomaaliya ayaana waxa uu keenay in Soomaaliya ay burbur ku yimaado. Waxa kale oo uu sheegay MW Waare in khatar ku imaan karto dalka keeni kartaana burbur hor leh hadii aan si degan aan loo qiimaynin xaalada dalku maraayo iyo saaxiibadda dhabta oo ay Soomaaliya yeelan karto.
Previous articleMW Axmed Madoobe ayaa maanta qudbad qiiro leh ka jeediyay furitaanka shirka Kismaanyo
Next articleKulan Xasaasi Ah Oo Maanta Ay Magaalada Muqdisho Ku Yeesheen Wasiirka Maaliyada Iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Oo War Laga Soosaaray
Qarax Lagu Dilay Gudoomiye oo ka dhacay Muqdisho
Somalida Dal mar rabaan ee Xil ayey Rabaan.